Dowladda Kenya oo Digniin Adag Kasoo Saartay Khatarka Xarakadda Al-shabaab – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dowladda Kenya oo Digniin Adag Kasoo Saartay Khatarka Xarakadda Al-shabaab
Gudoomiyaha dagmada Mandera ayaa digniin adag kasoo saaray in wax laga qabto xubnaha katirsan Alshabab ee dhanka qorista u qaabilsan ee dhalinyarada kunool dalkaasi uqoraya in ay xubin kanoqdaan Alshabaab.
Ali Roba gudoomiyaha dagmada Mandera ayaa dhanka kale sheegay in ciidamada amaanka dalkaasi ay laba jibaaraan howlgaladooda ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinkan loogeysanayo dhalinyarada kunool deegaanadaasi.
Mudooyinkii ugu dambeeyay dhalinyaro Kenyan ah oo la’ lasanaa ayaa laxaqiijiyay in ay usoo talaabeen xuduuda ay wadaagaan dalalka Somaliya iyo Kenya si ay ugu biiraan xarakada Alshabaab.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhalinyaradaasi maxkaxdooda labaday islamarkaana qaar kamid ah dhalin yaradaasi ay usuura gashay in ay dib kaga soo laabtaan fikirkii Xarakadda. Alshabaab.
Dhawaan ayay ahayd markii wargeyska the star uu daabacay warbixin ku aadan in dagaal yahanada Kenyan ka ah ee katirsan alshabaab ay hataan la kulmayaan cadaadisyo xoogan kuwaa oo qaarkood lagu eedeeyay in ay kala qeybin kusameenayaan dagaalyahanada reer galbeed iyo kuwa soomaalida ee kabar bar dagaalama Alshabaab iyo inay jaajuus u yihiin ciidamada midowga Africa Amisom iyo dowlada Soomaaliya.